Ihe 5 Imara Banyere kamera ndi uwe ojii - OMG Solutions
Sistemụ Mkpu Mberede
Onye ọrụ Mandown / naanị ya
Ihe 5 Ihe Knowmara Banyere Igwe Uwe ojii
Igwefoto eji ahụ mmadụ abụghị ihe ọhụrụ maka ọgbọ a. Anyị na-ahụkarị ndị na-eche nche na ndị ọrụ nchekwa na-eji nke a maka ọgụgụ isi mgbe ha na-arụ ọrụ. Dị ka ọ dị na teknụzụ ọ bụla, igwefoto uwe ndị uwe ojii na-eyi na-abụkarị ihe ọhụrụ na ụlọ ọrụ mmanye iwu. Dịka ụlọ ọrụ jiri nwayọ na-aga n’ihu mmemme ha, ọ dị mkpa ka ha leba anya na sistemụ igwefoto ahụ na-eyi ma nyochaa ma ọ bara uru na ọ ga-enweta ihe mere eme ya.
Ọ bụrụ na ndị mmadụ elebara anya n'okwu a, a na-ahụ na ọnụ ọgụgụ ndị uwe ojii na-eme ka mmadụ gharazie ịza ajụjụ ma jiri ya mee ihe mgbe ọ bụla. Nnyocha e mere egosiwo na a hụrụ omume na ọkachamara n'ọdịdị ya, ọ bụghị ihe ọhụrụ dịka ọ dị nkịtị, ndị mmadụ na-eme omume dị mma mgbe ha na-ahụ mgbe niile na ha nwere ike ịnọ na nche. A na-ahụta ha ka ha zere iji ike mgbe adịghị mkpa ma ọ bụ na-ezere iji ike gabiga ókè iji jide.
Otu onye ọrụ ndị uwe ojii dọpụtara abamuru nke ndị mmadụ mgbe ha nọ n'ahụ igwe
Ọ bụghị ozi ọma na ọtụtụ ụlọ ọrụ mmanye iwu nwere echiche na-emegiderịta banyere kamera ahụ nwere, ọtụtụ na-enwe ahụ erughị ala maka iyi ya mgbe ha na-arụ ọrụ. Benefitsfọdụ uru na nchegbu ndị a hụrụ bụ:
Inwe nghọta doro anya banyere ezi agwa mmadụ, ọ na-abụkarị nsogbu ma ị jide onye ọ bụla maka ịda iwu na njehie nke iwu. Mgbe ụfọdụ, a ga-ahụ ndị a anaghị efe efe ndị mmadụ uwe ejiji mmụọ ozi ma jiri nwayọ kwuo okwu. Ihe ndị a nwere ike bụrụ ihe nkụda mmụọ mana jiri igwefoto na-eyi uwe, vidiyo gosipụtara nwere ike imebi farce ma ọ bụ cha cha nke ha nwere ike ịnwale. Nke a nwere ike ịbara gị uru ma a bịa na mkpesa.
Igwefoto anaghị emebi emebi, anyị tụkwasịrị obi na ihe anyị ga-eji anya anyị abụọ hụ, nke a bụ ihe dị mma. Ọ dị mfe mgbe niile iwepụta ihe nkiri vidiyo iji nyere aka n'okwu ikpe, ị ga-ewere ndị juri ma ọ bụ onye ọka ikpe n'okporo ụzọ gosi ha ihe na-eme ebe ahụ. Mgbe ha ji anya ha hụ, ime mkpebi na-adịrị ha mfe.
Site na iwebata kamera ndị ahụ eyi, a na-ahụ na mkpesa dị ukwuu na mkpesa nke ndị uwe ojii boro ebubo. Ndị mmadụ na-eme omume karịa ma na-eme omume karịchaa mgbe ha maara na enwere ohere ha na-eleba anya.
Mbelata nke ukwuu na iwu ikpe banyere mpụ ebe ọ bụ na ndị omekome na-ekwupụta ikpe mara ebubo ozugbo emere vidiyo vidiyo maka ha. Ozugbo ejidere gị n'ime omume a enwere ike igosi onye ọ bụla ihe dị mfe, nke a na-ebelata ohere ma ọ bụ ịdị njikere nke onye ọ bụla na-agbachitere gị ebe ọ bụ na ihe niile na-egosi.
A na-enwekarị nsogbu ihe ndị uwe ojii kwesịrị idekọ ma ha ga - edekọ ihe niile? Ọ dị mma, nke a bụ nnukwu nsogbu, Body cams nwere ike imebi mmekọrịta onye uwe ojii na-ewuli kemgbe ọbịbịa ndị agha. Okwesiri iburu n'uche na ndi akaebe ebe mpụ ahụ hụrụ n'anya na-amaghị ama na ha ga-eme ike ọ bụla iji zere ịbụ ndị edekọ. Offọdụ n'ime uche a, na - eduzi ndị uwe ojii gbasara mgbe ha ga - eji uche mee ihe ma nyekwa usoro ga - eduzi iji ya. E nwere ụzọ abụọ dị mkpa iji nwee uche:
Otu onye chọrọ onye uwe ojii idekọ ihe niile ya na ọha na-eme ọ bụghị naanị mgbe a na - akpọ oku, nke a dị mkpa ka ịdekọ oge niile na - akparịta ụka na ndị nkịtị. Mana dị ka iwu ụfọdụ siri dị, ịchọ onye uwe ojii na-edekọ ihe ndị a niile na-emebi nzuzo nke ndị nkịtị ma mebie ya, ọ nwere ike bụrụ ihe ọjọọ ma emesịa nwee mgbagha.
Ihe ọzọ a chọrọ bụ ka onye uwe ojii rụọ ọrụ cam ya mgbe ọ na-aza oku maka ọrụ ha. Ọrụ ndị a nwere ike ịgụnye: nyocha, okporo ụzọ, njide mmadụ, nkwụsị, nchụso na ọbụna ịgba ajụjụ ọnụ. Inwe onye uwe ojii dekọtara ọnọdụ mpụ ndụ nwere ike inyere gị ezigbo aka ma nyere aka dozie ngwa ngwa nke ndị omekome ngwa ngwa.
Ezi uche bụ ihe dị oke mkpa a ga-enyocharịrị, nke a dị ezigbo mkpa n'ihi na ị nwere ike itinye aka na nzuzo ndị nkịtị ma nke a nwere ike ịkpasu iwe. Ọ dị mkpa iburu n'uche oge ịghara idekọ ihe omume; dị ka oge ndị a nwere ike ọ nweghị nsogbu. Agbanyeghị, nke a chọrọ ndị uwe ojii dee akwụkwọ gbasara ihe mere ha ga-eji wepụ kamera ndị ahụ.
Inwe kamera eyi ha nwere, emeela ka ha nwee ohere zuru oke nke inwe ike iji teknụzụ ihu ha mara onye dị na ya. Ojiji igwefoto a na-eme ka onye ọrụ uwe ojii dekọọ gburugburu ha, ruo ugbu a ha nwere ikike iwu iji nọrọ ebe ahụ. Akụkụ ọzọ ga-elekwasị anya, bụ ogologo oge enwere ike idobe, jiri ya, chekwaa ma ọ bụ zoo aka na ihe ederede ndị a. Nke a na-ekewasị ha n'etiti akara ngosipụta na-anaghị ahụ oke. Ihe mbu putara ihe nwere ike iji mee nyocha, ebe nkea putara na enweghi nsogbu ma obu nmekorita ya na nyocha, ya mere abaghị uru. Ọ dị mkpa iburu n'uche na onye uwe ojii nwere ike idekọ onye na-enyo enyo enyo gbaa ajụjụ ọnụ, mana ọ ga-abụ ihe na-ezighi ezi na ịdekọ ihe ọ bụla ndị nkịtị nọ n'okporo ụzọ. Ọ na-emebi iwu ma na-agaghị agafere ahịrị ndị a.
Ọ dị mma ịmara na cams ahụ na-eyi ahụ nwere ọtụtụ uru, mana ekwesịrị ileba anya na a ga-enyerịrị ndị uwe ojii ọzụzụ na ime ka ha mara oge na ebe ha ga-eji ya na kwa otu esi eji ya. Ekwesighi ikwubiga okwu ókè banyere ihe dị mkpa maka ezi uche.
A ga-echekwa nnukwu ego nke ga-emefu n'okwu ikpe n'ụlọ ikpe, ọ na-adịkarị mfe ịhụ ihe nkiri na gbochie itinye aka n'ụlọ ikpe. Ndị ọrụ nyocha na nyocha nke ụlọ nyocha na DC na DC Metropolitan ngalaba uwe ojii nyochara ma ọnụnọ igwefoto ahụ nwere n'ahụ ndị uwe ojii enweela mmetụta n'ụzọ dị ukwuu. Ha hụrụ na ndị ọrụ nwere kamera ndị na-eyi uwe na-etinye aka karịa n'okwu ụlọ ikpe, enwere otutu ejighị n'aka ebe ọ bụ na agọnarịghị ha nsonaazụ ikpe.
Nzuzo 5509 1 Echiche Taa